VITEC VIDEOCOM ၏စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် NAB ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » VITEC VIDEOCOM'S စက်မှုဦးဆောင်တံဆိပ် NAB ကြမ်းပြင်လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူ
Chatsworth, ကာလီဖိုးနီးယား (မတ်လ 29, 2016) ။ - Vitec Videocom၏, သည် broadcast ဌာနခွဲ Vitec Group မှ, NAB 2016 မှာစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်သူတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကဒီဧပြီလဖော်ပြရန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကားအရောင်းပြခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးပြပွဲများထဲမှနှင့်အတူ, မှာ Booth C6025 in ဗဟိုခန်းမ, Vitec Videocom အပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးလေးစားဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုအတူတကွဆောင်တတ်၏ Anton / Bauer က Autoscript, Autocue, Litepanels, Sachtler, OConnor နှင့် Vinten.
ယခုနှစ်တွင် NAB တက်ရောက်နှင့်အတူတွဲအရှိဆုံးအကြောင်းကိုစကားပြောကင်မရာများကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် Vitec Videocom'' s ကိုကဲ့သို့သောထင်ရှားတဲ့ပြသခဲ့သည်များ၏ပြခန်းမှာစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်အထောက်အပံ့များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, Blackmagic ဒီဇိုင်း, Ikegami, Fujinon, ကို Canon, Arri, Angenieux, နှင့်ပိုပြီး.
အလွန်အရေးပါသည့်အခါ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတာရှည်အမွေရှိသည်။ NAB 2016 သည့်အထောက်အပံ့များ, မိုဘိုင်းပါဝါဖြေရှင်းနည်းများ, အလင်းအိမ်နှင့်အခြားမူရင်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူအနုပညာပစ္စည်းကိရိယာများမိမိတို့ပြည်နယ်နှင့်အတူတွဲလုပ်ဖို့ရွေးယူဘူးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းကြည့်ဖို့တကျရောကျသူမြားအဘို့ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျ ", ကင်မရာများယုံကြည်မှုအတွက်မြောက်အမေရိကတွင်အကြီးဆုံးထုတ်လွှင့်စင်မြင့်ပေါ်မှာငါတို့အမှတ်တံဆိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များရှိသည်ဖို့ဂုဏ်ယူပြောသည်နေ မာတင် Vann များအတွက် Worldwide မှအရောင်းနှင့်စျေးကွက်၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ Vitec Videocom.
တက်ရောက်လာသဖြင့်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ် Blackmagic ဒီဇိုင်း, တဲ SL217 မှာ Anton / Bauer ရဲ့အသစ် Cine ဘက်ထရီစွမ်းအားဖြင့်မိမိတို့၏သစ်ကို URSA Mini ကို 4.6K ကြည့်ဖို့ - အမြင့်ဆုံးအာဏာကိုစားသုံးမှုဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံစတိုင်ကင်မရာများများအတွက်အထူးဒီဇိုင်း။ အသစ် 4.6K ကင်မရာအားဖြင့်စျေးကွက်-ဦးဆောင် 2560 အရည်ဦးခေါင်းကနေထောက်ခံပါလိမ့်မည် OConnorများစွာသောရုပ်ရှင်အစုံပေါ်မှာပုံမှန်ဖြစ်၏။
အဆိုပါ NAB ကြမ်းပြင်တစ်လျှောက်လုံး Live Show ၏သတ်မှတ်ချက်အပါအဝင်တွင် ထုတ်လွှင့်ဘိ, အများ၏ထုတ်လုပ်သူများ NAB ပြရန် အသက်ရှင်သောနှင့် k ကီဂမ်တဲ C7825 မှာဈ, တက်ရောက်ထိုကဲ့သို့သော Autoscript EPIC နဲ့ LED 12 အဖြစ် Autoscript ထံမှ teleprompting ဖြေရှင်းနည်းများ, "၏ပုံကိုအမျိုးမျိုးကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ ပြခန်း C3627 နှင့် C4325 မှာ, ကို Canon'' s ကို EOS C300, Mark II နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က 8K ကင်မရာများပေါ့ပါးသေးခိုင်မာတဲ့ဖိုက်ဘာမှန်-အားဖြည့်ပေါင်းစပ်ဆောက်လုပ်ရေးဝါကြွားတတ်ထားတဲ့ Sachtler ထံမှ Ace ကို L ကိုစနစ်ကဲ့သို့ဂီယာနှင့်အတူထောက်ခံလိမ့်မည်။ Sony က'' s ကိုပိုပြီးအားကောင်းကင်မရာစမ်းသို့မဟုတ် cams မပါဘဲထူးခြားတဲ့ counterbalance ယန္တရားတစ်ခုကို Vinten ရဲ့ Vector 750 ဦးခေါင်း, အားကစားအသံလွှင့်နေတဲ့အဓိက, ကထောက်ခံလိမ့်မည်။
ပရီမီယံကကင်မရာအနေဖြင့်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးဂိမ်းအတွက်အသုံးပြုမိုဘိုင်းပါဝါဖြေရှင်းနည်းများ, အမှနောက်ဆုံးတီထွင်မှုမှအော်စကာရုပ်ရှင်များတွင်အသုံးပြုထောက်ခံပါသည် Vitec Videocom ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ယခုနှစ် NAB ကြမ်းပြင်နီးပါးတိုင်းထောင့်မှာမိတ်ဆက်ပြသပါလိမ့်မည်။
Vitec Videocom - ကအရေးပါအခါသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပို့ဆောင်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောပစ္စည်းကိရိယာများ.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.vitecvideocom.com
2015 NAB ပြရန် angenieux Anton Bauer Anton / Bauer ARRI Autocue Autoscript Blackmagic ဒီဇိုင်း ကို Canon FUJINON ikegami LitePanels မာတင် VANN NAB NAB 2016 တိုက်ရိုက်ပြသ NAB NAB15 OConnor Vinten Vitec Videocom 2016-03-31
ယခင်: ဗီဒီယိုကိုသေနတ်သမား / Editor ကို
နောက်တစ်ခု: TriCaster®အဆင့်မြင့် Edition ကို Upgrade Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအိုင်ပီဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုစှမျးဆောင်ကြဉ်း